राजनीति फोहोर र सफाचट हुने खेल नै हो। खेल खेल्ने नियम यस्तै भए पछी खेलाडी पनि के कम जानेको सीप प्रयोग गरेका हुन्छन। मलाई त्यती धेरै ज्ञान त छैन साहित्य लेखनमा तर साहित्यप्रती रुची हुने र त्यसैमा कलम चलाऊनेको लागि ह्र्सो दीर्घको शुद्धीमा ख्याल पनि गर्नु पर्ने हो कि थरकि सर? जस्तै नीयम (नियम?!) शाम(साम?!) यी दुई शब्दहरुको अर्थ पनि फरक फरक लाग्छ क्यारे।
के हो ठरकीजी गिरिजा र प्रचण्ड लोकमान कार्की कहां जाने वित्तिकै कविता फुर्यो जस्तो छ नि!
"विश्वकै उत्कृष्ट व्यबस्था पनि
त्यस ठाउँमा फोहोरी खेल हुन्छ ... "
वाह ! सोह्रै आना सटीक विश्लेषण । बाँदरको हातमा नरिवल सिबाय केही हुन सकेन यो भूमि
। हुँदाहुँदा यस्तै फोहोरी खेल नै मानक गोरेटोमा स्थापित हुन गए झैँ भएको छ ।
लेकाली जी गल्ती औंल्याईदिनु भएकोमा धन्यवाद । केही दिन अलिकता व्यस्त थीएँ अब मिलाउँछु ।
शुन्य समय जी, यी गिरिजा र प्रचण्डले कार्कीलाई भेटेर मात्रै हैन, प्रचण्ड र माकुनेले सूदलाई अनी यस्तै यस्तै धेरै 'डबल रोल' खेल्ने नायकहरुका भेटघाट बाटै बनेको हो यो !
धाइबा जी, केही दिन अगाडि टेलिभिजनमा हेरेको थिएँ, आजकल केही बाँदरहरु पनि बाठा भैसकेछन । नरिवल भेटेमा जंगल नजिकको हाईवेमा राखेर गाडिले कुल्चाएर वा कुनै ठुलो ढुङ्गाले हानेर फुटाएर खान जान्ने भैसकेका छन बाँदरहरु पनि ।
हाम्रा देश चलाउनेहरुमा म त कहिलेकाही त्यत्ती बुद्दी पनि देख्दिन !